I-backlink idlala kanjani indima ebhizinisini lokuhamba?
Ukusungula ibhizinisi lokuhamba nge-intanethi kuhlale kuwumqondo omuhle njengoba lapha ungadonsela amakhasimende amaningi, ungakha umkhankaso wokuphromotha owenza umkhiqizo wakho waziwa embonini yakho. Noma kunjalo, ukuze uhlangabezane nemigomo yebhizinisi lakho, udinga ukuba nomkhankaso wokwenza umsebenzi wokusesha injini. Kungakhulisa isikhundla sakho sewebhusayithi yokuhamba noma kubhidlize yonke imizamo yakho ye-SEO. Yingakho udinga ukuba uqaphele ngokuphelele zonke izici zokusebenza futhi ukwazi ukuletha amakhono akho ekuphileni. Uma ungumuntu omusha kule ndawo, kungcono ukubhekisela ochwepheshe. Kodwa-ke, udinga futhi uqaphele kakhulu ekukhetheni i-ejenti efanele noma umcebisi njengoba kuneziningi zama-charlatans azenza njengabachwepheshe.
I-niche yemakethe yezokuvakasha iyinkampani ekhuphisana kakhulu lapho ufika khona ekhasini lokuqala le-SERP udinga ukutshala isikhathi esiningi, imali nemizamo. Yingakho, ngineluleka ukuba ube nesineke futhi usebenze kanzima. Ngaphezu kwalokho, kuwumqondo omuhle ukuvumela abakhi bokuxhumanisa bezisebenzi bakha iphrofayli yokuxhumanisa ephelele yesayithi lakho elizokwenza ibhizinisi lakho lihlale liphakeme kunezakhamuzi zakho.
Kulesi sihloko, sizoxoxa ngezindlela ezithile zokuthola ama-backlink okuhambayo kusayithi lakho bese udala umkhankaso wokwenza umsebenzi wokuwina.
Umkhankaso wokwakha umxhumanisi wakho wokuvakasha kufanele usekelwe ekuhlanganiseni
Akukho mali ehlanganisiwe ezokwenza indawo yakho yokuvakasha ibekwe kahle kuma injini ngaphandle uma inenqwaba kokuqukethwe okunamatheksthi kanye ne-anchor text. Kunamawebhusayithi amaningi kuwebhu enikeza abafundi ngokuqukethwe okungafaneleki futhi okungabalulekile. Abasebenzisi abanalo intando yokukwabelana ngalokhu kokucuketwa nokubhuka ibhola bakuthola kungabi nalutho nekhwalithi ephansi. Njengoba i-Google iba yinkimbinkimbi ngokwengeziwe, ingahlukanisa kalula phakathi kokufanelekile nokungaxhunyiwe kokuqukethwe kwesayithi. Yingakho kuba okubaluleke kakhulu ukudala imithombo yewebhu equkethe okuqukethwe okufanele nekhwalithi enenani elikhulu kubafundi.
Ngaphezu kwalokho, udinga ukuqinisekisa ukuthi umbhalo wakho we-anchor ufanisa nesihloko sakho sembonini. Kufanele inikeze isethulo esicacile salokho umsebenzisi azokugcina ngemuva kwesixhumanisi. Udinga ukugwema ukudala amathekisthi angabalulekile okukhanga abasebenzisi kumthombo wakho wewebhu noma izikhangiso. Okungahambisani nemibhalo yesisekelo yesihloko kwenza abasebenzisi bakhungatheke, futhi ngokwemvelo baphendukela komunye umthombo wewebhu ohambisanayo ekhasini lomphumela wosesho.
Sebenzisa amasevisi wokwakha izixhumanisi zokuhamba ukudala umkhankaso wokwakha umxhumanisi wokuwina
Ama-backlink angama-links axhumene nesayithi lakho kusuka eminye imithombo yewebhu ehlobene niche. Zibalulekile ekusebenziseni iwebhusayithi njengoba zingaveli kuphela ukugeleza kwe-traffic kusayithi lakho kodwa futhi zithuthukisa isikhundla sakho sesayithi ku-Google SERP. Noma kunjalo, akuyona umsebenzi olula wokwakha izixhumanisi uma ungenalo ulwazi kulolu chungechunge. Ngenhlanhla, ungathola ezinye izinsizakalo zokwakha izixhumanisi zokuvakasha kuwebhu. Izinsizakalo ezinhle kakhulu zewebhu kuwebhu yi-Moz, Semalt Auto SEO, nama-Ahrefs.
Inkampani yethu ikhethekile ekusebenziseni izinsizakalo zokwakha izixhumanisi futhi ikwazi ukusebenzisa amanye amasu angemuva we-backlink. Siyabambisana nemithombo engaba ngu-50 000 yewebhu emakethe amaningi emakethe kanye nezimboni. Yingakho sikwazi ukuhlinzeka ngamaklayenti ethu kokubili emuva kokugcina okuqhubekayo kanye nesikhashana. Imiphumela emihle yokwenza ngcono ye-Semalt amaklayenti ibonisa ukuthi kuwumqondo omuhle ukuba okungenani ube yingxenye yemizamo yakho ye-SEO eqondiswe ngabachwepheshe be-SEO abanolwazi. Ukubambisana kwe-Google ne-ejenti yezobuchwepheshe zedijithali kuzokwenza, kunokwenzeka ukuthi kunikeze izinsizakalo zokwakha emuva eziqinile ezizoqinisekisa ukuphumelela komkhankaso wokwakha isixhumanisi sakho sokuhamba Source .